Maxaan sameeyaa haddii aan qabo wax cabasho ah? – Transfer Galaxy
Maxaan sameeyaa haddii aan qabo wax cabasho ah?
Haddii aad qabto wax cabashooyin ah waxaan kugu soo dhaweyneynaa inaad la xiriirto Kooxdeena ee Taageerida Macaamiisha ama noogu soo qor warqad oo u soo dir TransferGalaxy AB, Complaints, Osmundgatan 12, 703 83 Örebro, Sweden.
Waxaan mar walba isku daynaa inaan xallino wixii su'aalo ah ama cabashooyin ah sida ugu dhakhsaha badan iyo waxay ahaato ba waxaad naga heli doontaa jawaab qoraal ah 15 maalmood ee maal maha shaqada gudahood laga bilaabo wakhtiga aan helno cabashadaada.
Fadlan ogow haddii, inkastoo aad la xiriirtay qaybta Taageerida Macaamiisheena, oo na aadan ku qanacsaneyn xalka waxaad la xiriiri kartaa Guddiga Qaranka ee Swedishka ee Khilaafaadka Macaamilka (ARN).